Ini ndiri mukadzi, mukadzi akaenda misi zhinji nevanhu, shure kufambidzana angu pamazuva. Saka ndinofanira kuona yakawanda yakasiyana tsika, pfungwa uye anouya nezvokudanana. Ndiri kuenda kugoverana nemi mukati Scoop pamusoro chii chaizvoizvo anoshandira vanhu kudanana nevakadzi, uyewo chii kudzivisa kufanana denda kana muri ikoko musi kana dzokukurukurirana mukadzi.
Ivai nechokwadi kuti imi Dzidzira Attraction idzi Builders
Romance wake – Isu vakadzi mapfeka kukwezvwa murume kuburikidza anzwe zvakabatana, ichi chinhu siyanei ainoita varume vakawanda ndinotenda. Saka tinogona kusangana munhu asina kunzwa zvachose kukwezvwa, Zvisinei pashure pokupedza nguva naye anogona kukunda isu pamusoro uye isu zvachose achawira naye. Izvi zvinoitika nguva dzose. Saka shandisa ichi. Romance wake. Usanetseka nokunenge yekare zvechinyakare – Handizivi ane mukadzi chete usingazogamuchiri kunzwa chaizvo kana munhu anotarisira kuti kudanana naye. Huchapa cherechedzai zvakavabatsirei ukaenda, maruva, kudhonza shure kwake cheya, kuwana mukova uye zvichingodaro. Kunyange kana musoro wake iye anotenda kuti kukwegura zvechinyakare, mumwoyo make iye achangozvinetesa uchanyauka, uye kuti ari kupi zvinokosha kwauri kuva nomugumisiro!
Mukumbire kuti kubhadhara - Izvi chaizvoizvo asunga vari pamwe apa. Zvose Hang kupota zvaunazvo pamusoro kubhadhara Ini pfungwa iwe kuakanda uye rutsoka bhiri kana uchida kuita zvakanaka pfungwa. Unoda kuziva sei? Verenga nyaya yangu pamusoro ndiani kubhadhara musi wokutanga.
kuzadzikisa naye (asi kwete yakawandisa) - A diki, kurumbidza zvechokwadi anoenda refu chaizvo nzira kuita mukadzi anzwe zvakanaka, uye anogona zvinonyauka kunyange coldest mwoyo. Zvisinei ngwarirai pamusoro-yekuzviita. Unogona naJessica sezvo kuchengeteka kana dzimwe shoko ose mumuromo wako anokutenda.
Shandisa Zvinonakidza isununguke - Dating kunogona kuva rakaoma chiitiko ndikarega uri nokuzivana naye saka isununguke nokuronga chinhu maoko pamusoro uye mafaro, pane makakatanwa akazadzwa nomuzariro musi kana chirariro izvo angapikisana zvakawanda sezvinoita yebasa! Go pano: rakasiyana kufambidzana mazano dzimwe pfungwa huru uye kuverenga pano: kuronga chinoshamisa pamusi wokutanga uzive mavakirwe kubatanidza.
Vakai makakatanwa - Makakatanwa kuvaka uye zvepabonde panova vari dzikaedzwa unyanzvi kuti kubvira kare nevanhu kuwedzera uchikwezvwa nomukadzi Vakafanana. Izvi hazvirevi here wava pabonde chipembenene, Zvisinei zvishoma zvinonakidza, tamba kunyepedzera anogona here inopisa zvinhu. Kusekwa ndeimwe nzira huru kuvaka zvepabonde kemisitiri chero hazvisi overdone. Ini kamwe yomusi mukomana uyo akashandisa izvi sezvo ake nzira huru kutaura nomukadzi. Pakutanga zvakanga mafaro, asi pashure kweawa kana maviri zvakanga pachena uchimhanya. wo, chikamu Makakatanwa chivako ndiko kuramba upenyu hwako uye rusununguko, kunyange paunenge achiwira kuti mukadzi.
Dzivisa Aya Dating Pazvikanganiso
Kuva Whiney - Vanhu zhamba zvakanyanyisa pamusoro zvinhu dzoro yakadaro kure. zvakakomba. Ini ndiri chokwadi yaungarondedzera kana uchiziva mumwe munhu moans dzose nguva. Unogona kufunga kuti hausi iwe, zvisinei, chete bvunza kupinda kuti. Dzimwe nguva isu veduwe uye zhamba pasina kunyange ndazviziva. Chaunonyanya kuzovakwirira vako vavakaroorana? Unoziva veduwe pamusoro: okunze, basa rako, mamiriro upfumi, vakadzi iwe zuva? Mikana kana ukaita izvozvo neshamwari dzako ipapo iwe kuzviita kana iwe naye, uye vanogona kuisa mukadzi kure. Vazive zvauri kutaura pamusoro yemichindwe dzako, uye mutauro uri kushandisa.
Achiratidza zvikuru kusachengeteka - OK saka isu tose tine zvimwe kunetseka, handisi mumwe bottling kukwira manzwiro, Zvisinei mumwe musi wokutanga haisi nzvimbo kuti zvinenge kusachengeteka yenyu kana muri kukwezva vanhukadzi, nekuti ndinoti kwamuri kuti hauzoodzwi kana ukaita kuti! Mukadzi sarabenzi angawana hunoita Zvisinei kuti aizova chakakomba vashoma. Nokuti vakadzi vakawanda ichi vachava kwatiri vachimhanya chando. Ini kamwe yomusi mukomana uyo akatanga kundibvunza kana ndaifunga akanga kukwezva pazuva rokutanga pamusi, uye nzira haana yakandiratidza zvakanga vachibva kunzvimbo kusachengeteka. Haana kushayiwa naro. Akaramba vachindipfimba, Handina kumuwana anoyevedza? Zvino akatanga vachiti kwakanga kusina nguva kufambidzana kana ndisina kumuwana anoyevedza uye akamuka zvikuru anosetsa nezvazvo. Chokwadi akanga ndakanga ndichiri vanoumba pfungwa dzangu kuti ndainzwa (yeuka kukwezvwa unoshanda zvakasiyana kwatiri vakadzi) Zvisinei nomumwe nguva nezvayo kukwezvwa wangu vakaburuka. Zvinobudirira akataura pachake kubva kuwana mumwe musi. Shanda kubuda nyaya yako kurapa, kana kumba woga, kwete mazuva ako. Kuonawo - kusachengeteka uye manzwiro akasiyana!
Bitching pamusoro Eks - Izvi kwandiri mumwe yakaipisisa vatadzi uye kuisa ini kure mukomana akanaka anokurumidza kupfuura Chocolate inonyunguduka pazuva rinopisa. OK, saka aimbova kwako kunge mukuru B * tch munyika yose, akasiya iwe yakaputsika zvishanu vana kurera, asi mukadzi iwe uri kufambidzana haazivi imi asi. Kana tasangana zvakaipa mouthing Eks iye achava kurondedzera zvakawanda Eks kupfuura iwe. Uyewo iye achava vanonetseka nezvakatongwa zvauchaita nezvake. Kurera aimbova vepakutanga mberi kudanana chete chimiro chakaipa uye zvachose basa (Chokwadi ndichaita nyaya yakanaka kwete kuunza Aimbova kuti kupinda ukama hwako nokusingaperi!) Chinokosha ndechokuti ani imi muri NOW, nomukadzi wacho pamberi penyu.
Kuva zvikuru Hang kupota (izvi Dzakafanana tsvuku mireza kwatiri!) - Ona zvose pamusoro. Hang zvinombooma kunogonawo anosanganisira ranting pamusoro anotyisa misi wanga uri, vachigunun'una kuti iye haana kunzi imi nokuti zvinoita kuti unzwe usina kuchengeteka, slagging zvose misi wanga uri, vachichema pamusoro kubhadharwa bhiri nezvimwewo. Inguva kuisa mukomana wako zvikuru bhurukwa pamusoro. Dzimwe nguva upenyu kuona ichidzvinyirira, asi kana uchida kuwana mberi mune zvokufambidzana mutambo dzimwe nguva unotofanira sveta ndikaridya! Zvikasadaro iwe achangozvinetesa uchingozvidya rako pachako facial. Ndinovimba kuti iwe sarudza kubuda imomo, rega ari Hang-nemateru chete vanonakidzwa kudanana nokuti mafaro, Hazvizivikanwi, uye dzimwe nguva kupenga ruzivo kunogona.
Uye pakupedzisira ...
Kanganwa zvose pamusoro uye kungova pachako! - Yes I chaizvoizvo havana kungoti kuti. Kudzidza uye kutevera ndandanda nhungamiro inogona dzimwe nguva kuti uve vemitsipa uye hunonyadzisa pamusoro misi dzako. Saka nepo zviri zvikuru kuverenga zano uye mull pamusoro kumubvumira kunyura mairi, musafunganya pamusoro pekubatira nayo yakakwana. Tora kufambidzana zano zvose senhungamiro pane kumhedziso kunofanira. Edzai zvinhu panze iwe kupfuura zvose yeuka chete kufaranuka uye unakirwe!
Makore mashanu Anna Gwayana, 36, akaora. Iye akatsvaka rubatsiro kubva vanachiremba, vatora mushonga siyana ...